‘झुम्का बजारको सुरक्षामा प्रहरी र स्थानिय सरकार चुप लागेपनि हामी चुप लाग्दैनौँ’
अन्तरवार्ता - असार १८, २०७६, बुधबार, रामधुनी
सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाको मूख्य बजारक्षेत्रको रुपमा झुम्का बजारलाई लिने गरिन्छ । पछिल्लो समय बढ्दै गएको सहरीकरण र जनसङ्ख्या बृद्धिका कारण जताततै सुरक्षा चुनौति बढ्दै गएको छ । केहि समययता झुम्का बजारक्षेत्रमा पढिरहेको चोरीका घट्नाले प्रहरीको सुरक्षा र उद्योग बाणिज्य संघको भुमिका माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो अबस्थामा उद्योगि र ब्यापारीको ब्यवसायिक सुरक्षाका लागि झुम्का उद्योग बाणिज्य संघ कँहा चुक्यो त ?
यी बिबिध बिषयमा झुम्का उद्योग बाणिज्य संघका बर्तमान अध्यक्ष धर्मेन्द्र शाह सँग खबरबिटका शिशिर भट्टराईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यसप्रकासर छ ।
पछिल्लो समय झुम्कामा बढ्दै गएका चोरीका कारण ब्यापारीहरुले असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । झुम्कामा कसरी यो अबस्थाको सिर्जना भयो ?
झुम्का क्षेत्रमा पछिल्लो समय चोरीका घट्ना बढेकै हुन । बिगतमा पनि चोरी नभएको त होइन । तर बिगतको तुलनमा घट्दै जानुको सट्टा अझ बढ्दै गइरहेका छन् । यो उद्योगि र ब्यापारीको ब्यवसायिकताका लागि खतराको कुरा हो । बजारको सुरक्षाका लागि भनेर नै नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र हाम्रो सहकार्यमा सीसीक्यामेरा जडानको काम पनि गरियो । अहिले बजार सीसीक्यामेराको निगरानिमा छ । तर प्रयासका बाबजुत पनि यसरी चोरीका घट्ना बढ्दै जानु दुर्भाग्यको कुरा हो ।
चोरीका कारण प्रहरी प्रशासनको सुरक्षा र उद्योग बाणिज्य संघको भुमिका माथि नै प्रश्न उठेनर ?
स्वाभाविक हो । प्रश्न उठेको छ । चोरी नियन्त्रणका लागि हामीले अथक प्रयास गरिरहेका छौँ । प्रयासका बाबजुत पनि अपराधिक कृयाकलाप नियन्त्रणमा आइरहेको छैन । यसका उद्योग बाणिज्य संघ र प्रहरीको तेत्रो दोष छ जस्तो त लाग्दैन । स्वयम इलाका प्रहरी कार्यलयका प्रमुख ज्यु पनि सुरक्षाका लागि अहोरात्र खटिरहनुभएको छ । तर प्रहरीले सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउँन नसक्नु राम्रो होइन । यो प्रहरीको कमजोरी हो । जसरी हुन्छ ब्यापारीको ब्यापार सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन प्रहरी सफल हुनु पर्दछ । त्यसका लागि हाम्रो तर्फबाट जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि हामी तयार छौँ ।
परिणाममुखी सुरक्षा ब्यवस्थाका लागि तपाइँहरुको माग के हो ?
हामीले प्रहरी समक्ष सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभुति माग ग¥यौँ । इलाका प्रहरी कार्यलयले आफुसँग पर्याप्त जनशक्ति नभएको भन्दै सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन नसक्ने जबाफ दियो । जिल्ला प्रहरी कार्यलयमा यो कुरा पु¥याउँदा अल्पकालका लागि केहि जनशक्ति झुम्का क्षेत्रमा थप गरिदिने आस्वासन आयो । अल्पकालका लागि मात्र जिल्लाले जनशक्ति पठाइदिने भएको कारण हामीले नगरपालिका समक्ष नगरप्रहरी परिचालन गरेर सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाइदिन आग्रह ग¥यौँ । नगरप्रहरी राख्न नमिल्ने नगरपालिकाको जबाफ आयो । यो हिसावले हेर्दा हामीले कतैबाट पनि सुरक्षाकोृ प्रत्याभुति नपाएको महसुस गरेका छौँ । हाम्रो स्पष्ट माग भनेको उद्योगि ब्यावसायिको ब्यापारको सुरक्षा हुँनुपर्दछ भन्ने हो ।
प्रहरी प्रशासन र स्थानिय सरकारले तपाइँहरुलाई सुरक्षाको मामिलामा सहयोग गर्न नसकेको खण्डमा तपाइँहरु के गर्नु हुन्छ ?
सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउँने काम प्रहरीको हो । यदि त्यो नभएको खण्डमा बैकल्पिक उपाएस्वरुप स्थानिय सरकारले नगरप्रहरी परिचालन गर्न सक्छ । यदि प्रहरी र स्थानिय सरकार कसैलेपनि झुम्काका ब्यापारीहरुको सुरक्षाका लागि केहि पनि नगर्ने हो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौ । उद्योगि ब्यापारीहरुको आफ्नो बलबुताले सुरक्षा गार्ड राख्छौँ । त्यसका लागि हाम्रो पहिलो चरणको छलफल पनि भइसकेको छ । तर पनि केहि समय हामी सरकारको बाटो हेर्छौँ ।
झुम्का उद्योग बाणिज्य संघ र ब्यापारीहरुको मूख्य चुनौति के देख्नुहुन्छ ?
सुरक्षाको चुनौति महत्वपूर्ण चुनौति हो । जव सम्म ब्यापारीमा पूर्ण लगानिको सुरक्षा महसुस हुँदैन तबसम्म ब्यवसाय राम्रो सँग संञ्चालन हुँदैन । सानो बजार छ, थोरै ब्यापारी छौँ । जनतामा चाहेको जस्तो ब्यापारीक लोकप्रियता कमाउन सकिएको छैन । बजारमा जताततै धुलो र धुवा छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । बारम्बार स्थानिय सरकार सँग बजार ब्यवस्थापनको माग गर्दा कुनै प्रकारको सुनुवाइ भएको छैन । बजार ब्यवस्थानकै अर्को पाटो हटिया पनि अब्यवस्थित छ । हटिया ब्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारको अनुदानमा केहि काम त हुँदैछ तर त्यो पर्याप्त छैन । हटियाका लागि भनेर भाडामा लिएको जमिन पनि उपयोग हुँन नसकिरहेको अबस्था छ । धेरै समस्या छन् । तर थोरै ब्यापारी छौँ । त्यति धेरै आर्थिक स्रोत पनि छैन । स्थानिय सरकारले समन्वय गरिदिए त केहि सहयोग हुँने थियो । तर जनप्रतिनिधिहरु बजार ब्यवस्थापनमा प्रतिबद्ध हुँनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
तपाइँको कार्यकालमा तपाइँहरुले गरिरहेका राम्रा कामहरु के के हुँन् ?
म आइसकेपछि ब्यापारीहरुलाई कर तथा प्यान नम्बरका बारेमा जानकारी गराउँने काम गरिरहेका छौँ । करिब ३ पटक आन्तरिक राजस्व कार्यलय धरानबाट टोलिनै बोलाएर ब्यापारीहरुलाई अभिमुखिकरण गराउँने काम भयो । ब्यापारीको हकहितका लागि भनेर नै बजारको सुरक्षाका लागि पहल गरिरहेका छौँ । करको बारेमा जानकारी नभएका र कर नतिरिरहेका ब्यापारीहरुलाई करको दाहेरामा ल्याउँने काम भएका छन् । ब्यापार ब्यवस्थित बनाउँका लागि भनेर हाम्रै अगुवाइमा बजारमा सीसीक्यामेरा जडानको काम पनि ग¥यौ । धेरै काम गरिरहेका छौँ । ब्यापारीको ब्यवसायिक सुरक्षा नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो ।
झुम्का क्षेत्रका केहि सामाजिक संघसस्थामा कार्यरत ब्यक्तिहरुले पनि स्थानिय सरकारले सहयोग र सहकार्य गर्दैन भन्नुहुन्छ । तपाई पनि स्थानिय सरकारले आफ्ना माग सुनुवाइ गरेन भन्नुहुन्छ । यसरी संघसस्था सँग स्थानिय सरकारको दुरी बढ्नुको कारण के हो ?
खै यो के हो स्थानिय जनप्रतिनिधिलाई सोध्नुपर्ला सामाजिक संघसंस्थाहरु सँग सहकार्य र सहयोग नगरी स्थानिय सरकारले के गर्न खोजेको हो ? यो मैले पनि नबुझेको कुरा हो । कार्यरत रामाजिक संघसस्था सँगको समन्वयात्क बिकास चाहि दिगो हुँन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । स्थानिय सरकारको निति तथा कार्यक्रम बनाउँने कुरामा हामीलाई बाइपास गरियो । समाज सँग छलफल नै नगरिकन स्थानिय सरकारका प्रतिनिधिले ल्याउँदै गरेको बजेटको यस्तो स्वरुप खासै उपलब्दिमुलक होला जस्तो मलाई लाग्दैन । इटहरी, बराहक्षेत्र लगाएत देशभरीका स्थानिय सरकारको नगरसभामा स्थानिय संघसस्था राजनितिक दल, सामाजिक अगुवा र मिडियालाई बोलाइयो । तर हाम्रो रामधुनीको नगरसभा सुटुक्क गर्ने काम भयो । जनप्रतिनिधिको यो गतिबिधिलाई हेर्दा मलाइ अचम्म लागेको छ । अस्ति १० गते सम्पन्न नगरसभाको बिषयमा जनप्रतिनिधिहरुलाई किन सुटुक्क नगरसभा गर्नुभएको भनेर मैले अनौपचारीक कुरा गर्दा नगरसभा नै भएको छैन भन्ने हास्यापद र गैरजिम्मेवार तर्कदिनुहुन्छ ।
अन्तिममा भन्दिनुहोस न, भर्खरै सम्पन्न इटहरी उद्योग बाणिज्य संघको चुनावी परिणा कस्तो लाग्यो ?
म खुसी छुु । सत्यको जित भएको छ । यो टिमले इटहरीका उद्योगि ब्यापारीको हकहितमा काम गर्ला भन्ने बिश्वास गरेको छु ।
जेसिजको कार्यक्रममा सबै सदस्यको सक्रिय सहभागिता नहुनु बिडम्बना : अध्यक्ष कार्की
नेपालमा कलाकारितालाई पनि आफन्तवादले छोडेन : कलाकार राई
‘जनप्रतिनिधिले रामधुनीको शिक्षा क्षेत्र सुधार्न महत्वपुर्ण भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने आशा छ’